Momba ny Papernerds.de | Fitsipika sy zava-misy | Papernerds
Izahay no voalohany!
Eto ianao dia afaka mahita ny mpiasan'ny Papernerds.
Ny mpanjifa sy ny mpanoratra dia mijanona tsy mitonona anarana tanteraka!
Soa azo avy amin'ny zavatra niainantsika nandritra ny taona maro tamin'ny fanoratana akademika
Faly mahalala anao
Ny orinasa Papernerds dia natsangana tamin'ny taona 2000 ary iray amin'ireo tetikasan-trano lehibe voalohany eo amin'ny sehatry ny taratasy ho an'ny mpianatra. Nandritra io fotoana io dia nanampy mpanjifa an'arivony maro izahay handalo fampianarana mazava tsara, taratasy antonta-taratasy, bakalorea ary taratasim-panadinana ary hahazoana mari-pahaizana ambonimbony kokoa amin'ny mari-pahaizana master, thesis diploma na thesis doctorat. Ny orinasa dia olona ara-dalàna voasoratra ara-panjakana ary tompon'andraikitra amin'ny kalitaon'ny serivisy araka ny fehezin'ny lalàna alemanina.
Tsiambaratelo sy fahatokisana
Fifanarahana ofisialy amin'ny alàlan'ny tolotra anay. Torolàlana momba ny fiarovana angon-drakitra. Fanarahana ny antoka amin'ny famerenam-bola. Fanohanana feno ho an'ny mpanjifa.
Kalitao sy faharetana
Fanarahana henjana ny fe-potoana napetraky ny mpanjifa. Fanamarinana fanampiny momba ny asa amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso kalitao ho an'ny: formatting, plagiarism (amin'ny alàlan'ny programa rindrambaiko maro), tsipelina, fitsipi-pitenenana, mari-piatoana ary votoatiny.
Fanompoana sy fampiononana
Mpitantana manokana ho an'ny mpanjifa tsirairay. Fanohanana amin'ny fantsom-pifandraisana rehetra. Rafitra fihenam-bidy, fampiroboroboana ary raffles voaangona ho an'ny mpanjifanay.
Kalitao sy faharetana. Fanarahana ny fe-potoana napetraky ny mpanjifa. Famerenana fanampiny ny asa amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso kalitao amin'ny: atiny, endrika ary lahasa asa. Fanamarinana plagiarism amin'ny alàlan'ny programa rindrambaiko maro.
Fanompoana sy fampiononana. Mpitantana manokana ho an'ny mpanjifa tsirairay. Fanohanana amin'ny fantsom-pifandraisana rehetra. Rafitra fihenam-bidy, fampiroboroboana ary raffles voaangona ho an'ny mpanjifa.
Ny ekipanay dia misy olona tanora falifaly mankasitraka ny fanavaozana, ny fahalalahana anaty, ny hatsikana, ny vokatra tsara ary ny fahatsapana ny fiarahamonina ao amin'ilay ekipa.
Ny mpitantana anay dia manana traikefa an-taonany maro amin'ny fanohanana ny taratasin'ny mpianatra hatramin'ny ora fandefasana hatramin'ny fandefasana. Ny fampiofanana matihanina mitohy ataon'ny mpanoratra dia manome antoka ny kalitao avo indrindra sy ny fahafaham-po an'ny mpanjifa.
Ireo manam-pahaizana manokana dia mitantana ny asa ampanaovina antsika amin'ny lohahevitra sy taranja rehetra. Ny mpiasa tafiditra amin'ny famoronana mivantana ny sanganasa dia tsy misy afa-tsy mpampianatra mampianatra, mpianatra doktorà, tompony ary diplaoma diploma - amin'ny ankapobeny dia mpanoratra izay nanangana tena ho matihanina amin'ny ambaratonga avo indrindra.
Mahafinaritra ny mihaona aminao - faly izahay manohana anao!
Zava-misy mahaliana momba antsika
Kopy kafe no lanin'ny mpiasa isan-kerinandro
ny mpiasa tonga miasa amin'ny bisikileta
Hatreto amin'ity taona ity dia nahazo fanomezana ny mpanjifanay
Manome anarana ny zavamaniry izahay
Ny fialamboly malaza indrindra dia ny mozika
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny fanoratana matoatoa ve ianao?
Jereo eto bebe kokoa!